Nepal, oo ah dhul buuro waawayn iyo muuqaal qurxoon | Safarka Absolut
Nepal waa wadan yar oo kuyaala xadka udhaxeeya laba weji: Shiinaha iyo Hindiya. Iyada oo leh dhul buuro leh oo ay ku jiraan qaar ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee Himilays, Waa meel aad ufiican hadaad jeceshahay socodka ama fuulitaanka si aad uhesho muuqaalka qurxoon ee muuqaalka laga arki karo Annapurna ama leedahay Everest.
Laakiin, haddii aadan haysan ruuxa xiisaha leh, Nepal sidoo kale waxay leedahay waxyaabo badan oo kale oo ay ku siiso. Waxaad booqan kartaa magaalooyin sida Patan, Kathmandu o Bhaktapur, oo leh meelihii qarniyadii dhexe, daaraha dhaadheer iyo macbudyo qarsoon. Sidoo kale waad ogaan kartaa jardiinooyinka dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, Nepal waa meesha ugu fiican ee aad ku gaari karto nirvana. Haddii aad rabto inaad ogaato, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad na raacdo.
1 Maxaa lagu arkaa laguna sameeyaa Nepal
1.1 Everest iyo Annapurna
1.2 Jardiinooyinka dabiiciga ah ee Nepal
1.3 Kathmandu, caasimada dalka
1.4 Dooxada Kathmandu, waa wado kale oo muhiim u ah dalka Nepal
1.5 Pokhara, magaalada kale ee loo dalxiis tago ee Nepal
2 Waxa laga cuno Nepal
3 Sida loo tago wadanka Aasiya
4 Tilmaamaha loogu safrayo Nepal
Maxaa lagu arkaa laguna sameeyaa Nepal
Waxaan ku bilaabi karnaa safarkayaga Nepal jimicsi yar ka dibna waxaan ku baran karnaa magaalooyinkeeda waaweyn iyo meelaheeda muqaddaska ah, innaga oo ilaawin aagagga kale ee dabiiciga ah ee quruxdooda aan ka yareynin tan buuraha.
Everest iyo Annapurna
Khasab kuguma aha inaad noqotid fuulitaan hawleed si aad ugu dhowaato labada soojiidasho ee ugu weyn Nepal: the Everest iyo Annapurna. Waxaad kor ugu kici kartaa xerada saldhig midka hore, oo ku yaal joog ka sarreeya shan kun oo mitir. Sidaad u fahmi karto, maahan dalxiis sahlan maaddaama uu socdo qiyaastii afar iyo toban maalmood jirrada joogtuna waxay ka dhigeysaa xitaa mid aad u adag. Laakiin waa mid la awoodi karo inta badan booqdayaasha. Waxaad u baahan doontaa a ogolaansho gaar ah, laakiin khibraddu way u qalantaa.
Waxaad sidoo kale aadi kartaa socodka Annapurna. Wadajir, waxay sameeyaan waddo laba boqol iyo konton kiiloomitir ah oo aad ku qaban karto heerar iyo si gooni ah. Laakiin, xaalad kasta, waad ku raaxeysan doontaa muuqaalka buuraleyda ee adduunka.
Dhinaca kale, maskaxda ku hay ka cimilada. Bilaha ugufiican ee gala buurahan waa Oktoobar, Nofeembar iyo Diseembar hal dhinac iyo Maarso, Abriil iyo Maajo dhinaca kale. Janaayo iyo Febraayo laguma talinayo sababtoo ah heerkulka hoose iyo barafka. Marka la eego Juun, Julaay, Ogast iyo Sebtember, waa xilli roobaadka oo waddooyinka dhib ka dhiga. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa run in, bilaha ugu habboon ee booqashada buuraha, ay jiraan tiro aad u tiro badan oo dalxiisayaal ah oo doonaya inay maraan jidadkooda.
Beerta Qaranka ee Royal Chitwan
Jardiinooyinka dabiiciga ah ee Nepal
Dalka Aasiya wuxuu leeyahay dhowr jardiinooyin dabiici ah. Waad booqan kartaa tii Bardia, oo ku taal koonfur-galbeed kuna caan baxday shabeellada Bengal iyo yaxaasyada waaweyn. AMA midka Langtang, halkaas oo ay jiraan shabeel baraf ah iyo orso. Laakiin, wixii ka sarreeya oo dhan, waa inaad taqaanaa laba jardiinooyin oo loo diiwaangeliyey sida Dhaxalka aduunka.
Tan koowaad waa midka Sagarmatha, kaas oo ku yaal gobolka Kumbu daboolaya qayb wanaagsan oo ka mid ah masaajidkii Everest. Waxaad bilaabi kartaa safarkaaga ah xarunta martida, taas oo ku taal magaalada Namche Bazaar. Marka laga hadlayo noocyada autochthonous, waa aagga diqsiga Tibetan.
Ta labaad, dhinaceeda, waa Beerta Qaranka ee Royal Chitwan, oo ku taal koonfurta dalka taasina waxay ahayd keyd boqortooyo. Magacaaga macnihiisu waa "Wadnaha hawdka", taas oo ku siin doonta adiga fikrad ah dhirta aad helayso. Xagga xayawaankeeda, waxay leedahay dhowr nooc oo khatar ku jira sida wiyisha Hindiya ama Ganges gharial, waa sauropsid aad u weyn oo sankiisa yar uu kaliya u oggol yahay inuu cuno kalluunka.
Kathmandu, caasimada dalka
Si aad u booqato Kathmandu waa inaad gasho magaalo ay ku nool yihiin hal milyan oo qof oo leh wadooyin aan laami lahayn, wasakh weyn iyo sanqadha dhagaha la ’. Laakiin sidoo kale waxay marin u haysaa taallooyin cajaa’ib leh, kuwaas oo qaar ka mid ah ay waxyeeleeyeen dhulgariirkii 2015.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ku booqato Kathmandu waa Fagaaraha Durbar, xuduntii u adeegi jirtay hoy ahaan reerka boqortooyada. Dhab ahaan, durbar macnaheedu waa "qasri." Waxay ka kooban tahay laba jibbaaran iyo jidadkeeda ku dhow, oo leh dhismayaal daarran iyo macbudyo. Laakiin waxa ugu xiisaha badan ayaa ah guriga reer Kumari. Kani waa magaca loo bixiyo gabadh yar oo loo doortay inay matasho ilaahnimada isla magacaas. Waxay tahay qof ka mid ah dhaqanka Newar iyo si ay u noqoto Kumari, gabadha yar waa inay ka gudubtaa imtixaanno badan. Intaas waxaa sii dheer, in kasta oo doorkiisu soconayo, kama bixi karo gurigiisa iyo macbudkiisa gabi ahaanba.
Sidoo kale waa inaad ku aragtaa Kathmandu the Boudhanath stupa, mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka oo loo caleemo saaray indhaha Buddha. Galab kasta, suufiyada ka kala socota daafaha dalka ayaa isugu soo urura hareeraheeda iyagoo tukanaya. Intaas waxaa sii dheer, agagaarkaaga waxaa ku yaal makhaayado badan iyo dukaamo gacmeedyo Tibetan ah.
Sidoo kale, waa inaad u dhawaataa Macbadka Buddhist Swayambhunath, oo ay ka buuxaan daanyeerrada astaamaha lagu garto, oo ah Goob Dhaxal Adduunyo oo ku taal buur aad ka arki doontid magaalada oo dhan. Ugu dambeyntii, booqo Macbudyada Kopan iyo Phullari oo ku nasato Beerta Riyooyinka, Xadiiqad naqshad qurux badan oo neoclassical ah oo ku taal bartamaha Kathmandu.
Dooxada Kathmandu, waa wado kale oo muhiim u ah dalka Nepal
Kama bixi kartid caasimada adigoon ogeyn waxa loogu yeero Dooxada Kathmandu, oo ay kujiraan taas iyo sidoo kale laba magaalo oo kale: Patan iyo Bhaktapur, iyo sidoo kale wadar ahaan boqol iyo soddon taallo muhiimaddaas oo kale in aagga loo aqoonsaday inuu yahay Goobta Hidaha Adduunka ee Khatarta ah.
Patan sidoo kale wuxuu leeyahay mid gaar kuu ah Fagaaraha Durbar, oo iyaduna ah barxadda qasriga boqorradii hore. Waxay kaloo leedahay dhowr macbud sida Krishna, oo laga sameeyay dhagax octagonal ah; Degutale o Vishwanath ah, maroodiyaasheeda dhagaxa ah. Dhammaantood waxaa la dhisay qarnigii toddoba iyo tobnaad waxaana lagu kala soocay daaqado lagu magacaabay jajab.
Ku saabsan Bhaktapur, loo tixgeliyey diiradda ugu weyn ee dhaqanka ee dalka, sidoo kale waxay leedahay sida ay xarunta dareemayaasha ah durbar square. Deegaankeeda, waxaad ku leedahay dhismooyin sida kan Qasriga shan iyo konton Windows, ka Albaabka Dahabka ah iyo macbudyo sida Batsala ah, dawankeeda weyn, ama Pashupatinath, oo ay ku xardhan yihiin xardhitaanno gaar ah oo erotic ah.
Iyaga kaliya maahan kuwa magaalada jooga. Macbudka Changu narayan, oo shan kiiloomitir u jirta, waa kan ugu da'da weyn dalka oo dhan, halka kan Nyatapola, fagaaraha Taumadhi iyo shan dherer oo metelaya canaasiirta, waa tan ugu sareysa dalka Nepal.
Pokhara, magaalada kale ee loo dalxiis tago ee Nepal
Magaaladaani waxay leedahay dabeecad aad uga duwan kuwii hore, waana magaalada labaad ee ugu dalxiiska badan dalka. Maxaa yeelay booqashada ku xigta hareeraheeda macnaheedu ma aha inay arkaan dhismayaal waaweyn (in kasta oo ay iyaguna jiraan), laakiin Aragtiyo yaab leh.
Kaliya soddon kiiloomitir, buuraha waxay kacaan kudhowaad toddobo kun oo mitir iyagoo sameysanaya gorgorro qurux badan. Ka dhex istaag iyaga midka ku yaal webiga Gandaki, taas oo ah tan ugu qoto dheer Dunida. Waxa kale oo aad leedahay aagga Poghaka ah harada pewha, oo leh laba biyo-dhac oo cajiib ah oo biyaheeda, ka dib markay ku dhacaan iyaga, la waayo.
Kaliya jasiiradda harada waxaad ku leedahay Macbadka Barahi, halka qaybtii hore ee magaalada aad ku leedahay kuwa Bindhyabasini y Bhimsen. Intaa waxaa sii dheer, Pokhara waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee laga bilaabo safarada Himalayas.
Waa magaalada labaad ee Nepal tirada dadka deggan iyo mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee wax soo saarka warshadaha. Taasi waa sababta aan kuugu xusno. Si kastaba ha noqotee, waa mid ka mid ah kuwa yar booqashooyinka kharashka badan safarkaagii aad ku tagtay dalka Nepal maadaama uusan lahayn dhismayaal xusuus gaar ah leh.
Waxa laga cuno Nepal
Gastronomy-ka wadanka Aasiya waa natiijada saameyn badan. Kuwa ugu muhiimsan waa kuwa Hindiya, Shiinaha iyo Tibetan deriska la ah. Laakiin sidoo kale waxay leedahay waxyaabo cunno Thai ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee, weligaa ma heli doontid suxuun hilib lo'aad leh, maxaa yeelay waa a xayawaan xurmaysan qayb wanaagsan oo ka mid ah dadkeeda.
Taabadalkeed, waxaad haysataa gisi iyo riyo. Laakiin habka qaran ee qaranku waa dal bhat tarkari, Saxan combo ah oo ka kooban maraq misir, bariis, iyo khudaar la shiilay. Waxaa loogu adeegaa saxaarad qaybaheeda kala gooni ah waxaana weheliya qajaar, lime, liin ama chili cagaaran.
Cunto kale oo dhaqameed ayaa ah Momo, oo ka kooban nooc ka mid ah kubbadaha hilibka ee habka Tibetan iyo dhir udgoon. Waxaa loo diyaariyaa, si hufan, lo'da, ariga ama hilibka digaagga, laakiin sidoo kale kaliya khudaarta. Dhiniciisa, wax iga dheh ama baastada isku shiilan waxay ka timaadaa cunada shiinaha.
Cunnooyinka kale ee caadiga ahi waa kachila ama hilib shiidan ku darso, syen ama beerka shiilan, the pukala ama hilib shiilan, the kwati ama maraq digir ah iyo kan wo ama keeg lentil. Sida macmacaanka, waa wax aad u badan in dhau ama yogurt iyo abate, nooc ka mid ah macaanka dhanaan.
Saxan momos leh suugo
Ugu dambeyntii, oo ku saabsan cabitaanka, shaah waa qaran. Meelaha buuraha, si ay u kululaadaan, waxay u qaataan si aad u xoog badan oo subag leh. Laakiin sidoo kale waad isku dayi kartaa masago ama bariis; ah casiirka usha sonkorta; ah mahi, taas oo ah caano subag ama tan rakshi, masago diley.
Sida loo tago wadanka Aasiya
Wadanka Aasiya wuxuu leeyahay garoon diyaaradeed oo caalami ah, Tribhuvan ee Kathmandu, duulimaadyada ka yimaada adduunka oo dhan. Markaad halkaa gaarto, waxaad safarro ku tagtaa magaalooyin kale. Si kastaba ha noqotee, kuma talinayno maadaama madaarada kale ee Nepal ay yar yihiin qaarna ay khatar badan yihiin dabeecaddooda buuraleyda darteed. Intaas waxaa sii dheer, diyaaradaha sameeya jidadka sidoo kale waa kuwo tayadoodu liidato.
Safrayaal badan ayaa doorbidaya inay u safraan Nepal iyagoo ka tagaya New Delhi. Waxay ku sameeyaan gudaha tren magaalada xadka ku taal ee Raxaul, taas oo wali iska leh Hindiya, ka dibna bas u raac Kathmandu.
Si kastaba ha ahaatee, isgaarsiinta ma ahan sida saxda ah dacwada adag ee Nepal. Wadooyinka ayaa ku jira xaalad aad u xun basaska isku xira magaalooyinka kala duwanna waa kuwo aan raaxo laheyn maadaama ay jaban yihiin. Waxaa jira gawaari kale oo ka socda shirkadaha gaarka loo leeyahay oo wax yar ka qaalisan, laakiin sidoo kale xoogaa ka raaxo badan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, laguguma talinaayo inaad ku dhex safarto habeenkii. Darawallada ayaa inta badan ka faa'iideysta waddooyinka maran si ay u ordaan iyo shilalka waa wax caadi ah. Sidoo kale, xatooyada shandadaha badanaa way dhacdaa, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad ku xirto qufulka.
Dhinaca kale, Sharciyada Nepal ayaa kaa hor istaagaya inaad wadato gaari kiro ah. Taabadalkeed, way kuu fududaan doontaa inaad shaqaaleyso mid leh darawal mana aha mid aad qaali u ah. Ugu dambeyntii, inaad ku dhex wareegto magaalooyinka waaweyn, waxaad leedahay caan rickshaw labada baal iyo koronto (waxa loogu yeero jeer, kuwaas oo waaweyn), iyo sidoo kale basaska yaryar. Xiisad ahaan, waxaan kuu sheegi doonaa taas, si aad uga degto, waa inaad saqafka ugu garaacdaa qadaadiic.
Fagaaraha Durbar ee Patan
Tilmaamaha loogu safrayo Nepal
Si aad u soo gasho waddanka Aasiya waa inaad haysataa baasaboor shaqeynaya ugu yaraan lix bilood. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay a fiiso gaar ah maxaad ka hawl gali kartaa online gudaha web waaxda socdaalka ama qunsuliyada Barcelona. Haddii aad booqanaysid Himalayas ama buuro kale waxaad sidoo kale u baahan tahay WAQTIGA, rukhsad gaar ah oo aad ka shaqeyn karto markaad timaado.
Dhanka kale, waa inaad xirataa tallaalo kala duwan. Kuwa ugu caansan waa gawracatada, qandhada jaalaha ah, daacuunka, MMR, cagaarshowga, iyo teetanada. Duumada ayaa sidoo kale soo noqnoqota. Si kastaba ha noqotee, GP-gaaga ayaa kugu wargalin doona tan. Sikastaba xaalku ha ahaadee, talladayada ayaa ah inaad shaqaaleyso a caymiska safarka wanaagsan si aad si fiican u daryeesho haddii shil ama jiro dhacdo.
Marka laga hadlayo lacagta waddanka, waa rupee nepalese ah. Waxaan kugula talineynaa, intaadan safrin, inaad u bedesho euro doolar isla markaana, mar garoonka diyaaradaha ee Kathmandu, ku la mid sameyso kuwan lacagta maxalliga ah. Waxa kale oo jira guryaha isdhaafsiga ee magaalooyinka, laakiin waxay ka qaadaan komishan dheeri ah.
Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa inaad iska qorto Diiwaan Gelinta Socdaalka laga bilaabo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Isbayn si ay u ahaato mid si fudud loo heli karo haddii ay jiraan dhibaatooyin. Taasna, mar aad joogtid Nepal, waad cabaysaa uun biyo dhalo ah iyo tan ha dhadhamin miro ama saladh aan maydhnayn si looga baaqsado wicitaanka "Cudurka shubanka ee socotada".
Gabagabadii, Nepal waa waddan qurux badan oo adiga ku siiya buuraha ugu dheer meeraha. Iyo waliba taallooyin tiro badan iyo gaasriiko aad uga duwan tan galbeedka. Hadaad rabto inaad noolaato waayo-aragnimo ka duwan, waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad u safarto wadanka Aasiya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Nepal